Igama lesiqhelo: i-mitomycin (KAKHULU kumqondo omninzi)
Igama lebrand: Mutamycin
Iifom zedosi: umgubo efakwa ngenaliti (20 mg; 40 mg; 5 mg)
Udidi lweziyobisi: Iintsholongwane / ii-antineoplastics
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngoFebruwari 3, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
IMitomycin isetyenziswa ngokudibeneyo namanye amachiza omhlaza ukunyanga umhlaza wesisu kunye nepancreas.
IMitomycin inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
IMitomycin inokonakalisa iiseli ezibomvu zegazi, ezinokubangela ukuba zingaguquki ukusilela kwezintso . Xelela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba unayo ukugruzuka okungaqhelekanga okanye ukopha, ulusu olukhanyayo, ukudideka, ukudinwa okanye ukucaphuka, iintlungu zesisu, igazi urhudo , umchamo obomvu okanye opinki, ukudumba, ukukhawuleza ukutyeba, kunye nokuchama kancinci okanye ukungabikho.
I-Mitomycin inokuyenza buthathaka (icinezele) amajoni akho omzimba, kwaye unokufumana usulelo ngokulula. Biza ugqirha wakho ukuba unempawu zosulelo (umkhuhlane, ubuthathaka, iimpawu ezibandayo okanye umkhuhlane, izilonda zolusu, ukugula rhoqo okanye okuphindayo).
Akufanele uphathwe nge-mitomycin ukuba uyaliwa, okanye ukuba une:
amanqanaba asezantsi eeplatelets egazini lakho;
uxinzelelo lomongo wethambo; okanye
ukopha okusebenzayo okanye nawuphina umngcipheko wokopha.
isifo sentliziyo; okanye
umbefu , isifo esinganyangekiyo semiphunga ( ICOPD ), i-apnea yokulala, okanye enye ingxaki yokuphefumla.
IMitomycin inokulimaza usana olungekazalwa. Sebenzisa ulawulo lokuzalwa olusebenzayo ukukhusela ukukhulelwa, kwaye uxelele ugqirha wakho ukuba uyakhulelwa.
Akufanele uncelise ngelixa usebenzisa i-mitomycin.
Inikwa njani i-mitomycin?
I-Mitomycin inikwa njengokufakwa ngaphakathi emthanjeni. Umboneleli wezempilo uya kukunika i-mitomycin.
Xelela abo bakunonophelayo ukuba uziva uvutha, iintlungu, okanye ukudumba ujikeleze inaliti ye-IV xa kutofwa i-mitomycin.
Abanye abantu abafumana i-mitomycin baye banezilonda kulusu apho kuye kwenziwa inaliti, okanye kwezinye iindawo zomzimba. Utshintsho lolusu lunokwenzeka iiveki ezininzi okanye iinyanga emva kwenaliti ye-mitomycin. Fowunela ugqirha wakho ukuba uphawule ububomvu, izilonda, ukubola, okanye olunye utshintsho lolusu ngexesha okanye emva konyango lwakho nge-mitomycin.
IMitomycin ichaphazela amajoni akho omzimba. Unokufumana izifo ngokulula. Uzakufuna iimvavanyo zonyango rhoqo, kwaye idosi yakho elandelayo inokulibaziseka ngokusekwe kwiziphumo.
IMitomycin inokuba neziphumo ezihlala ixesha elide emzimbeni wakho. Unokufuna iimvavanyo zonyango okwethutyana emva kwedosi yakho yokugqibela.
Fowunela ugqirha wakho ngemiyalelo ukuba uphoswa yingqonyelo yenaliti ye-mitomycin.
Kuba eli yeza linikezelwa yingcali yezempilo kwindawo yezonyango, ukubetha ngokugqithisileyo akunakulindeleka ukuba kwenzeke.
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngelixa ndifumana i-mitomycin?
Kuphephe ukuba kufutshane nabantu abagulayo okanye abanesifo. Xelela ugqirha wakho kwangoko ukuba uvela kwiimpawu zosulelo.
Gwema imisebenzi enokunyusa umngcipheko wokuphuma kwegazi okanye ukulimala. Sebenzisa ukhathalelo olongezelelekileyo ukunqanda ukopha ngelixa utsheva okanye uhlamba amazinyo.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeMitomycin
IMitomycin ingonakalisa iiseli ezibomvu zegazi, ezinokubangela ukusilela kwezintso okungenakuguqulwa. Xelela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba unayo ukugruzuka okungaqhelekanga okanye ukopha, ulusu olukhanyayo, ukudideka, ukudinwa okanye ukucaphuka, iintlungu zesisu, urhudo olunegazi, umchamo obomvu okanye upinki, ukudumba, ukutyeba ngokukhawuleza, kunye nokuchama kancinci okanye ukungabikho.
iimpawu zentsholongwane (umkhuhlane, ubuthathaka, iimpawu zokubanda okanye umkhuhlane, izilonda zesikhumba, ukugula rhoqo okanye ukuphindaphinda);
ukuvutha, ukuqina kwesifuba, ukukhwehlela okutsha okanye okuba mandundu, ukukhathazeka ngokuphefumla;
iblister okanye izilonda emlonyeni wakho, iintsini ezibomvu okanye ezidumbileyo, ingxaki yokuginya; okanye
iintlungu, ukutshisa, ukuba bomvu, ukudumba, ukucaphuka, okanye utshintsho lolusu apho kunikezwe khona inaliti.
umkhuhlane okanye ezinye iimpawu zosulelo;
isicaphucaphu , ukugabha , urhudo, ukungabi namdla wokutya;
ukozela, intloko ebuhlungu ;
ukungaboni kakuhle; okanye
okwethutyana ukulahleka kweenwele .
Ulwazi lwedosi yeMitomycin
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala yomhlaza wesisu:
Emva kokubuyiswa ngokupheleleyo kwehematologic kuyo nayiphi na ichemotherapy yangaphambili: 20 mg / m2 IV kwi-6- ukuya kwi-8 yeeveki
-Ngenxa yokunyuka kwe-myelosuppression, abaguli kufuneka baphinde bavavanywe emva kwekhosi nganye yeli chiza kwaye idosi incitshisiwe ukuba isigulana sinetyhefu.
-Iidosi ezingaphezulu kwe-20 mg / m2 aziboniswanga ukuba zisebenza ngakumbi kwaye zinetyhefu kunedosi ezisezantsi.
-Kusasazwa i-adenocarcinoma yesisu ngokudityaniswa okuqinisekisiweyo kunye nezinye izinto ezivunyiweyo ze-chemotherapeutic okanye njengonyango lokunyanga xa ezinye iindlela zisilele
-Kusasazwa i-adenocarcinoma yepancreas ngokudibeneyo kunye nezinye izinto ezivunyiweyo ze-chemotherapeutic okanye njengonyango lokunyanga xa ezinye iindlela zisilele
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala kwiCancer yeGastric:
-Kusasazwa i-adenocarcinoma yesisu ngokudityaniswa okuqinisekisiweyo kunye nezinye iiarhente zonyango ezivunyiweyo okanye unyango kunyango xa ezinye iindlela zisilele
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela mitomycin?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-mitomycin, kubandakanya amayeza kagqirha kunye namayeza iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
Ngaba iMitomycin iyasebenzisana nezinye iziyobisi?
emva kokuba imithungo isusiwe
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 6.01.
indlela yokwenza iintolo kwimayini yam
Isoftware yokuhlela ifoto nikon simahla
Ipilisi emhlophe engqukuva c37
indlela yokudibanisa iposti ye-facebook